IZimbabwe Imanyana Lamanye Ukunanza Ilungelo Lomntwana WaseAfrica
Uzulu emazweni awezwekazi leAfrica agoqela eleZimbabwe, umanyana ukunanza usuku lapho kwabulawa khona ontanga abatshengisela besola indlela ababephathwa ngayo kwele South Africa. Kodwa inkokheli enhlanganisweni ezilwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ezitaladeni eHarare bathi ababoni isizatho sokunanza leli langa leDay of the African Child njengoba, inengi labasakhulayo beqhubeka bebhekane lobunzima obubangelwa yikuswela imisebenzi, sebengabaphila ngokuthengisa laloba befundile.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wenkokheli zenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa, owenzelwe eMedia Centre lamuhla ekuseni, wokubonisana phezu kokungenziwa ukululungisisa udaba lokwanda kwasebephila ngokuthengisa.
Lezinhlanganiso okubalisa eye Zimbabwe Informal Sector Organisation, zivumelene ukuba abalahlekelwa yimiphefumulo laba kwakungontanga njengabo, ababelwela amalungelo abo.
Abasakhulayo babikwa kuyibo abaqhubeka bebhekana lobunzima, uhulumende engela macebo wokusilungisisa isimo esesibangelwe yikungami kuhle kwezomnotho.
Umqondisi wenhlanganiso ye Zimbabwe Informal Sector Organisation, umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kunje abatsha yibo abanengi abathengisa ezitaladeni ngokuswelakala kwemisebenzi, kungakho kabasiboni isizatho sokunanza lolusuku.
UMkhwananzi uthi makungakhangelwa njengodubo ukuthengisa ezitaladeni kodwa luhluzisiswe ukuba kuyini imbangela, ngoba lokhu kuveza isimo esingamanga kuhle kwezombusazwe.
Uthi kunje endaweni yokunanza lolusuku, abaphila ngokuthengisa bengabahlalele evalweni, bengazi ukuba kuyozalwa nkomoni lapho lolosuku lokuba basuswe endaweni abasebenzela kizo lusondela.
Inhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni laba, okubalisa eye National Association of Vendors’ Union leye Zimbabwe Informal Sector Organisations, zithi kuyinto edanisayo ukuba abasakhulayo abaphatheka kuleyo mizabalazo yase Soweto kwele South Africa yokulwela amalungelo abo, bafela ize ngoba kungekho kuzinikela kwenkokheli ukulungisisa okwabenza bazinikela imiphefumulo yabo.